Sina 2020 Vaovao 360 Kavina Cryolipolysis sy ny vatana mampihena ny fanamboarana sy ny orinasa DY-Magia3 | Danye
2020 Kavina sy cryolipolysis vaovao vaovao 360 mampihena ny vatana DY-Magia3
Teknolojia mangatsiaka 360 tena izy, ny tavy dia ahazoana vokatra azo esorina; Tanana fitsaboana: loha saoka 360 sy loha vatana 360; Ny mari-pana mangatsiaka dia mety ambany kokoa amin'ny -10 degre
Ity teknolojia ity dia avy amin'ny siansa cryolipolysis, izay mampiasa ny valin'ny sela amin'ny hatsiaka mba hanapotehana ny tavy matavy. Amin'ny alàlan'ny fitrandrahana angovo avy amin'ny sosona matavy, ny fizotrany dia mahatonga ny sela matavy ho faty tsikelikely nefa mamela ny hozatra, hozatra ary sela hafa tsy misy fiantraikany. Mandritra ny volana maromaro aorian'ny fitsaboana, ny sela matavy efa levona dia alefa any amin'ny rafitra lymphatic mba hosivanina ho fako. Ity fomba fiasa ity dia toa azo antoka amin'ny fotoana fohy, miaraka amin'ny mombamomba ny voka-dratsiny voafetra, ary miteraka fihenan'ny tavy lehibe rehefa ampiasaina amin'ny adiposities localized.
1. Ny sehatra cryolipolysis 360 dia nampifangaro teknolojia 4 ao amin'ny rafitra 1: 360 Cryolipolysis + Vacuum + RF + Cavitation hamahana tanteraka ny olan'ny hoditra;
2. Ny lohan'ny cryolipolysis roa dia manana fantsom-panafana 360 degre feno hahazoana ny lafiny cryo amin'ny vatana ary hahazo ny traikefa mamoaka tavy tsara indrindra;
3. Hafa noho ny masinina hafa eny an-tsena, ny rafitray dia miaraka amin'ny mpanara-maso ny mari-pana mba hifehezana tsara ny hafanana avoakan'ny cryo hialana amin'ny ratra mangatsiaka amin'ny hoditra;
4. Loha cryolipolysis roa no afaka miasa amin'ny vatana amin'ny fotoana iray ary ny mari-pana ambany indrindra dia mety hidina hatramin'ny -15 degre （-20 degre misy);
5. Ny lohan'ny cryo dia vita amin'ny kalitaon'ny ABS, TPR ary Aluminium tsara sy maharitra, tsy mora tapaka amin'ny fanarahana fampitahana
1. Fanesorana tavy saoka roa
2. Manimba ny hafanam-po mifangaro (sela matavy) amin'ny vatana iray manontolo
3. Manatsara ny metabolisma sela
4. Amboary ny saokany
5. Avereno atao ny endrik'ilay vatana
6. Hatsarao ny hoditra malemy
7. Fanatsarana ny metabolisma amin'ny hoditra
8. Famerenana amin'ny laoniny ny vohoka
TECHNOLOGY Cryolipolisis 360
Efijery miasa Efijery mikasika 10.4 lehibe lehibe
Loha miasa mahazatra Vatana 360 cryo: 178mm * 85mm * 60mm
360 saoka cryo: 70mm * 30mm * 25mm
Haavo mangatsiaka Kilasy 1-5 azo ovaina
Fanerena vacuum Kilasy 1-3 (-15-25Kpa) azo ovaina
Ny mari-pana manodidina 5-40 ℃
Herin'ny milina 1000W
Ny refin'ny masinina 38cm (L) * 39cm (W) * 98cm (H)
Lanja tsy afa-karatsaka 51kgs
Teo aloha: Vacuum 4 Cryolipolysis vaovao 4 amin'ny sehatra 1 DY-CRYO
Manaraka: Vertical high power 808 755 1064 onja mifangaro an'ny esoprano soprano es dioda fanesorana volo laser DY-DL501
Vaovao 360 Cryolipolysis Vacuum 4 amin'ny sehatra 1 DY ...